Fanamboarana ny lalana teto Antananarivo : Nanokana 4 miliara Ariary ny minisiteran’ny Asa vaventy -
AccueilSongandinaFanamboarana ny lalana teto Antananarivo : Nanokana 4 miliara Ariary ny minisiteran’ny Asa vaventy
Fanamboarana ny lalana teto Antananarivo : Nanokana 4 miliara Ariary ny minisiteran’ny Asa vaventy
Mbola ao anatin’ny fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra tanteraka ny minisiteran’ny Asa vaventy, izay tarihin’ny minisitra Razafimandimby Eric, amin’izao fotoana izao, ho fanarahana ny baiko avy amin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Eo amin’ny teboka 6 eo moa no hifantohan’ny asa, dia lalana Anosizato sy Ampitatafika, Ampasika mihazo an’ Itaosy, na dia efa anjaran’Atsimondrano aza no manao ny asa ary Ampasika hatrany Anosy izay mandalo 67 ha. Eo koa ny lalana Iavoloha mankany Anosy, Ambohijatovo ambony hatrany Andravoahangy ambony, ary lalana Mahazoarivo mipaka hatrany Ampandrana mandalo Bel’air, Ankorahotra ary hatreny Ankorondano. Ny lalana Ambodinisotry manoloana ny tsena fivarotana lamba mihazo ny tobin-tsolika vaovao eny 67 ha izay eo andalam-panamboarana tanteraka amin’izao fotoana izao, raha toa ka efa vita ny ampahany amin’izany, ary efa azon’ny fiara aleha. Mba hialana sy ho fisorohana amin’ny fahasimbana matetika dia miavaka ny fanamboarana ny lalana tamin’ity taona ity mba tsy hiverimberenan’ny fahasimbana intsony. Nisy noho izany ny fampiasana akora vaovao mahazaka rano, ho an’ireo lalana feno lavadavaka. Ho an’ireo lalana simba matetika indray dia navadika ho “béton” toa ny hita eny Anosy manoloana ny Senat sy Ankorondrano manoloana ny orinasa Henri Fraise ary 67ha Atsimo eny amin’ny Enam. Eo koa ny famadihana ho rarivato na “pave” ireo lalana, toa ny eny Ambodinisotry.
Tsy vitan’ny nanamboatra ireo lalana fotsiny ihany anefa no nataon’ny minisiteran’ny Asa vaventy fa koa nandray an-tanana ny fisokirana ireo lakan-drano rehetra teto an-drenivohitra mba hahafahan’ny rano mivezivezy izay mbola olana lehibe eto Antananarivo. Raha tsiahivina moa dia ny faran’ny volana martsa lasa teo no vita ny andiany voalohany tamin’ny fanamboarana, ary ao anatin’ny andiany faharoa tanteraka ny minisitera amin’izao fotoana izao, izay vinavinaina hovitaina ao anatin’ny volana vitsivitsy. Raha ny vaovao voaray dia mitentina 4 miliara Ariary ny tetibola hanatanterahana ny fahasimbana rehetra, izay volan’ny minisitera madiodio. Tsiahivina hatrany fa andraikitry ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fanamboarana ireo lalana simba eto amin’ny renivohitra, ka tafiditra amin’izany ny fanampenana ireo lavadavaka fa ny lalam-pirenena ihany no sahanin’ny minisitera, saingy noho ny tsy fandraisana an-tanana nataon’iry voalohany dia voatery ny minisiteran’ny Asa vaventy nanao ny asa satria tsy afaka hiandry ny olona tsy hanao. Nefa raha ny angovom-baovao azo dia nanokana vola 10 miliara Ariary ho an’ny fotodrafitrasa ny kaominina, ka mampametra-panontaniana ihany hoe, hampiasaina amin’inona io vola io kanefa ny lalam-bahoaka tsy amboarina?
Notsindrian’ny Ceni manokana, nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ny solontenan’ny kandidà omaly, ny fitsipika tokony harahina mandritra ny fampielezan-kevitra. Isan’ny notsindrian’izy ireo tamin’ izany ny voalazan’ny andininy faha- 57, mikasika ny lalàna fototra mifehy ny fifidianana ...Tohiny